इङल्याण्ड र आयरल्याण्डको वेल्समा विश्कप क्रिकेटको आयोजना भइरहेको छ । क्रिेकेटप्रेमीहरु साथीभाइहरुसँग बसेर रमाइलो गर्दै क्रिेकेटपनि हेर्नुभएको होला । तर, क्रिकेट हेरिरँदा ध्यान त्यतै मात्र हुने भएकोले आफूले के खाइरहेको छु भन्ने पनि पत्तो नहुने अवस्था आउछ या कतिपटक त तपाईलाई क्रिेकेट हेर्दा के खाएँ भन्ने सम्झना पनि आउँदैन होला ! यत्ति मात्र याद हुन्छ होला जे खाएपनि पेट त भरियो । तर, त्यस्ले तपाइको स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार खाना खाँदै टिभी हेर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पनि हुन सक्छ । त्यसकारण पनि तपाईको खानामा स्वस्थ्य खाना समावेश हुनैपर्छ ।
आउनुहोस् जानौं क्रिेकेट हेर्दा खानका लागि कस्ता खाना स्वस्थ्यकर हुन्छन् त ?
मम – मम सबैको प्रिय खानानै मानिन्छ । मम देख्दा मुख नरसाउने मानिस पनि कमै होलान् । तर, ममलाई बाहिरबाट ल्याएर भन्दा घरमै बनाएर खाँदा उत्तम हुन्छ । जसलाई मैदा भन्दा पनि आटामा बनाउन सकिन्छ । अझ त्यसमा मासु भन्दा पनि मनपर्ने हरियो तरकारी, पनिर लगायतको किमा बनाएर खान सकिन्छ ।
पास्ता-त्यस्तै धेरै मानिसको रोजाइ रहेको मनपर्ने खाना पास्ता पनि खान सक्नुहुन्छ । भेजिटेवल पास्तामा फ्याट पनि कम हुने भएकोले हरियो तरकारीहरु समावेश गरेर बनाउन सकिन्छ ।
बदाम–क्रिकेट हेर्ने क्रममा साथीहरुसँग बसेर बदाम पनि खान सकिन्छ । बदाममा आइरन, नियासिन, फलोट, क्याल्शियम र जिंक फाइन्छ । साथै यसलाई प्रोटिनको राम्रो श्रोत पनि मानिन्छ । तर, एकैदिन धेरै बदाम खाने बानी हानिकारक हुन सक्छ । बदामसँग अरु कुनै स्न्याक्स पनि लिन सक्नुहुन्छ ।
अन्डाको भुजिया-अन्डाको भुजिया पनि राम्रो मानिन्छ । यो हल्का र प्रोटिनयुक्त खाना हो । अन्डामा धेरै पोषकतत्व हुने हुनाले यो शरीरका लागि धेरै फाइदाजनक पनि हुन्छ । भुजिया बनाउनका लागि प्याज, खुर्सानी, हरियो प्याजको पात, धनिया तथा मनपरेको तरकारी सानो–सानो पिस काटेर मिसाएर खान सकिन्छ । अन्डालाई तावामा फ्राइगर्ने क्रममा सानो–सानो पिस बनाउने र स्वाद अनुसार नुन र पहिले तयार पारेको भेजिटेवलमा मिसाएर खान सकिन्छ ।
कागती पानी-किक्रेट हेर्न बस्दा धेरै मानिसहरु रमाइलोको लागि वियर या कोल्ड ड्रिंक्सहरु खाइरहेका हुन्छन् । क्रिेटमा भएको जित हारका क्रममा मन स्थिर हुने र के खाएको छु भनेर सम्झना नहुँदा त्यस्ता पेय पर्दाथमा भएको चिनीले स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ । यदि तपाई घरमै कागती पानी बनाएर बिरेनुन र भुटेको जिरा मिसाएर खान सकिन्छ । यसले तपाईको वजन पनि कन्ट्रोल गर्दछ ।
फ्रुुट सलाद-फ्रुट सलादलाई हल्का खानाको रुपमा लिइन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि पनि अत्यन्तै फाइदाजनक मानिन्छ । फलफूलमा चिनी हुनाले यो खाँदा ब्लड सुगरको लेवल बढ्दैन । साथै फलमा फाइबर पनि हुने भएकाले पेट भरिने र वजन घटाउन पनि सहयोग गर्दछ । तपाईलाई मन परेका फलफूल स–सानो पिस बनाएर चाट मसला राखेर खान सकिन्छ ।
धावक किरण सिंह बोगटीलाई स्वर्ण, यो सँगै नेपालको स्वर्ण ४२ पुग्यो
२१ मंसिर, काठमाण्डौं । तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) अन्तर्गत…
माल्दिभ्स विरुद्धको खेलमा नेपाल ८६ रनले विजयी
२० मंसिर काठमाडौँ । जारी १३औँ दक्षीण एसियाली खेलकुद (साग)…
नेपाली महिला क्रिकेट टिम श्रीलंकासँग ४१ रनले पराजित
श्रीलंका महिला टिमले नेपाललाई दियो ११९ रनको लक्ष्य
भारत र वेस्टइंडिज बिचको पहिलो टि–२० पूर्वावलोकन
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको सतकमा नेपालले भुटानका लागि दियो अहिले सम्मकै विशाल लक्ष्य